Ku saabsan - Cuntooyinka Taagaga
La kulan shaqaalahayaga u heellan inay u adeegaan derisyadayada Twin Cities.
Hel wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan waxa ka dhacaya Meals on Wheels.
Ma qabtaa su'aal ku saabsan Cunnooyinka Taayirada? Waxaan ku dadaali doonaa inaan halkaan uga jawaabno.
"Waxay si weyn ii caawiyeen inaan nolosheyda dib ugu soo laabto kalyaha la tallaalay ka dib, ilaa aan ka dareemo raaxo inaan ku soo laabto jikada."
- Rudolph, Cunnooyinka Taayirada qaata